श्वेतपत्रमा धराशयी देखाइएको अर्थतन्त्र ५ महीनामै बन्यो खतरामुक्त | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर श्वेतपत्रमा धराशयी देखाइएको अर्थतन्त्र ५ महीनामै बन्यो खतरामुक्त
on: १४ भाद्र २०७५, बिहीबार ०८:३९ मुख्य खबर, समाचार
श्वेतपत्रमा धराशयी देखाइएको अर्थतन्त्र ५ महीनामै बन्यो खतरामुक्त
Latest posts by तुफान घिमिरे (see all)
सेज ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा : सेज स्थापना र सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई पनि खोल्न प्रस्ताव -
वनको कालिज शहरको रेस्टुराँ छिरेपछि… -
बोनस ऐनको संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग : पुनः औद्योगिक द्वन्द्वको सम्भावना -
५ महीना अगाडिको श्वेतपत्रले देखाएको अर्थतन्त्र
६ महीनाअघि नयाँ सरकार गठन भएपछि गएको चैत १६ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गरे । श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।’ बजेट अनुशासन उल्लङ्घन भएकाले सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको डा. खतिवडाको भनाइ थियो । यसको कारणका रूपमा उनले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको, सहज व्यावसायिक वातावरणको अभाव, स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट, आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा रुमल्लिएको उल्लेख गरेका थिए ।
लामो श्वेतपत्रमा दुई दशक अगाडिदेखि पाँच वर्ष अगाडिको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर अहिलेको अवस्था धराशायी रहेको उनको निष्कर्ष थियो । औद्योगिक तथा पूर्वाधार विस्तारमा निजी लगानी उत्साहप्रद ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका थिए । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको उनले दाबी गरेका थिए ।
५ महीनापछिको अर्थतन्त्र
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको १९औं वार्षिक साधारणसभामा सहभागी अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ५ महीनाअगाडि आफूले ल्याएको श्वेतपत्रले देखाएको अर्थतन्त्रको अवस्था गलत भएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र कुनै खतराको बिन्दुमा छैन । यसमा हामी निश्चिन्त भए हुन्छ । हामी एउटा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रथम चरणमा छौं र हामी स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढ्दै छौं ।’
हाम्रा एक/दुईओटा परिसूचकमा केही खाटा या केही छन् भनेर समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसको नकाबले ढाकिदिने काम नगरौं भन्दै उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रका राम्रा पक्षलाई एउटा दुईओटा कमजोर पक्षले ढाकिदियो भने हाम्रो मनोबल गिर्छ । लगानीकर्ताको मनोबल गिर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिर्छ । र मुलुकको अर्थ प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने निजीक्षेत्रको मनोबल गिर्छ । त्यो काम हामी नगरौं ।’
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेपछि यो ५ महीनाको बीचमा गरेको एउटै काम भनेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु हो । साउन १ गतेदेखि लागू भएको हिसाबले त्यो कार्यान्वयन भएको बुधवार एक महीना १२ दिन भएको छ । तर, बजेट अभैm पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बुधवार भने, ‘बजेट कार्यान्वयन शुरू भएको ६ हप्ता पनि भएको छैन । अब हामीले अहिले नै रिजल्ट मागिहाल्यौं भने त्यो पनि अतिशयोक्ति हुन्छ । भदौको १२ गतेसम्म आइपुग्दा बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अधिकांश क्षेत्रका कार्यविधिहरू, नियमावलीहरू अथवा त्यससँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरू तयार गरिसकेका छौं र अब हामी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दै छौं । त्यतिन्जेल त पर्खिदिनु पर्‍यो नि ।’
आफ्नै पार्टी नेकपाका सांसदको तीव्र आलोचना खेपेको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट ल्याउनेबाहेक अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका अन्य आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रम लागू भएका छैनन् । तर, उनले ५ महीनाअगाडि राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा धराशयी देखेको अर्थतन्त्र एकाएक खतरामुक्त रहेको बताइदिए । कसरी त ? उनले भने, ‘तथ्याङ्कहरू आफै बोल्छन् । तपाईंहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित हुने आर्थिक स्थिति पढिरहनु हुन्छ, हेरिरहनुहुन्छ, लेखिरहनुभएको छ ।
नेपालको इतिहासमै लगातार २ वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि प्राप्त ग¥र्यौं र त्योभन्दा माथिल्लो आर्थिक वृद्धिको अहिले हामी परिकल्पना गरिराखेका छौं ।’ थप स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘त्योभन्दा माथिल्लो आर्थिक वृद्धिको अहिले हामी परिकल्पना गरिराखेका छौं । त्यसको लागि हामीले तयारी गर्दै छौं ।
त्यो आर्थिक वृद्धिले ल्याउने बचत, त्यसले बढाउने राजस्व सङ्कलनको क्षमता, त्यसले सृजना गर्ने लगानीको अवसर र त्यसले सृजना गर्ने उपभोगको हामी कल्पना गर्न सक्छौं । त्यसले हामीलाई विकास, आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट छिटो विकास गर्ने एउटा स्पाइरल खडा गर्दै छ । त्यो स्पाइरलमै छौं हामी । हामी माथि नै जाँदै छौं, तल जाने वाला छैनौं ।’
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले श्वेतपत्र जारी हुने बेलामा अर्थमन्त्रीलाई एउटा आरोप लगाएको थियो, ‘नेकपा नेतृत्वको सरकारले २ दशक अगाडिदेखिका सरकारले गरेका सबै काम नकारात्मक देखाएर, आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै पनि धराशयी भएको देखाएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई अत्याउने काम गरेको छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भनेका थिए, ‘आधारहीन तथ्य उभ्याएर अर्थतन्त्रलाई अहिले कमजोर देखाई आफ्नो सरकार बनेपछि सबै राम्रो गरेको देखाउने गरी ओली सरकारले जस लिन खोजेको देखिन्छ ।’
प्रतिपक्षीले भनेजस्तै श्वेतपत्र ल्याएको ५ महीनामा ओली सरकारले कुनै ठूलो आर्थिक उपार्जनको काम नगरिकनै एकाएक धराशायी भएको अर्थतन्त्र कसरी उकासियो त ?
श्वेतपत्रमार्फत अघिल्ला सरकारलाई गलत देखाएर आफ्नो सरकारले सबै सुधारेको देखाउने प्रयास गरेको विपक्षीको दाबी छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै भने, ‘अहिले राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो । तर, हाम्रो कानूनी सङ्क्रमण सकिएको छैन ।
वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको डेढ महीना पनि भएको छैन । यतिमै सबै कुरा ठीक गर्नुपथ्र्यो भनेर अपेक्षा गर्नु अलि कठिन हुन सक्छ । अहिले नै हामीले प्रतिफल खोजिहाल्ने र त्यसअनुसारको अपेक्षा बनाइहाल्ने कुराहरू गर्दा अलि अव्यावहारिक होला । केही समय पर्खिदिनुस् । हामीले कुनै नराम्रो काम गरिराखेका छैनौं । राम्रा काम गरिरहँदा खेरी अलिकति समय लाग्दो रहेछ ।’